Qaylo dhaanta Kenya maxaa u sababa, baroortu orgiga ka weyn? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Qaylo dhaanta Kenya maxaa u sababa, baroortu orgiga ka weyn?
Kenya ayaa ku eedesay dowladda Soomaaliya in ay shirkii london ku xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yalla dhul baddeedka Soomaaliya ee Kenya ay sheeganayso. Sawirka: Google
Muqdisho (XT) – Dowladda kenya ayaa mar qura afka furatay oo dib u soo nooleysay khilaafkii dhulka badda, ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya ee ay labada dal isku dacweeyeen Makammadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee Hague.
Hadalka dowladda Kenya ayaa soo shaac baxay xilli la sugayo in bisha September ee sanadkaan lagu dhawaaqo go’aanka dacwaddii khilaafka badda ee labada dal. Runtii si dhab ah looma oga waxaa ku kalifay in ay si lama filaana ah Kenya ugu yeerato safiirkeedii Soomaaliya, isla markaasna ay safiirkii Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Nuur Tarsan, ay ku amarto in uu deg deg dalkiisii wadatashi u aado. Waxay ahayd arrin lalayaabo oo diblamaasiyadda ka baxsan, waayo dalkasta isaga ayaa xor u ah in uu safiirkiisa wadatashi ugu yeerto, laakiin sida maamuuska diblamaasiyadeed yahay ma dhacdo in lagu amro safiirka in uu dalkiisii wadatashi u aado. waxay ahayd arrin ku ugub ah diblamaasiyadda labada dal ee xiriirka qotada dheer ka dhexeeyo, mana habbooneyn in ay sidaani dhacdo.
Dadka indha indheeya siyaasadda gobalku, waxay sheegayaan in Kenya ay ula jeeddey tillaabadaan ay qaadday ee ay Soomaaliya ku eedeysay in ay xaraash gelisey dhulkii badda ee la isku haystey,in u jeeddadeedu ahayd in ay Soomaaliya cadaadis ku saarto in wada xaajood laga galo arrinta khilaafka badda. taas oo dowladda Soomaaliya ayna xilligaan diyaar u ahayn horeyna u diiddey. Dowladda Soomaaliya waxay ku tilmaantay mid aan sal iyo raad toona lahayn, waxayna hoosta ka xariiqday in aan ladhaawicin xiriirka ballaaran ee dhinacyada badan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Ilo xog ogaal ahina waxay xuseen, in Kenya ay dooneyso dadkeeda in ay ku qanciso in ay dadaashey dowladdu laakiin ay arrintu farahooda ku jirin, waa haddii laga xukumo dhulka la isku hayo.
Waxaa kalo sabab looga dhigayaa hadallada dhiillada xanbaarsan ee dowladda Kenya, in laraalli gelinayey dowlado kale oo dano ka leh dhulka badda ee la isku hayo, haatanna shirkadahoodu ku suganyihiin.
Kenya, waxay wel wel ka qabtaa in haddii laga xukumo dhulka khilaafku ka jiro in uu ka dhasho xukunkaasi Kenya in ay bixiso mag dhow iyo qarashkii dacwaddaba sidaasi darteedna ay u jeeddadeedu tahay ku qabso ku qadi meyside.
Soomaalida oo dhexdeeda khilaaf siyaasadeed ka aloosnaa ayaa ma qura ku midoobey hadalka ka soo yeeray dowladda Kenya, waxayna Soomaalidu mucaarid iyo muxaafidba ku midoobeen in hal meel laga wada istaago khilaafkaan loogana danbeey Dowladda Soomaaliya.
Shacabka Soomaaliya, waxay aad u soo dhaweeyeen sida dowladda Soomaaliya uga jawaabtey khilaafka Kenya, iyadoo loo arkey in uu ahaa hadal xikmad ku dhisnaa, sidii ugu habboonaana loo dhigay.
Runtii, waxaa jirta in arrintaan badda ay rag badan oo Soomaaliyeed baal dahab ah ku galayaan, halka kuwo kalana ay baal murugo ku galayaan.
Hasayeeshee, dhacdooyinka soo socda ayaa kala caddeyn doona waddaniyiinta iyo khaa’iniinta.
Previous articleMaxaa ku soo kordhay shirka Kim Jong-un iyo Trump
Next articleMadaxwayne Farmaajo oo Dooxa kula kulmaya Amiirka Qadar